jeudi, 03 août 2017 22:54
Mahajanga: Miseho amin'ny endriny hafa indray ny halatra Bajaj
Raha halatra piesy tsotra no mateti-pitranga sy aharaisan'ny mpitandro ny filaminana fitarainana amin'ny andavanandro, teto dia hafa kely mihitsy satria nivoaka tamin'ny garazy fiantsonany ilay Bajaj, avy eo nafindra tany an-toeran-kafa vao nalaina ireo kojakoja rehetra azo nesorina taminy.
Omaly maraina no very teny amin'ny Fokontany Manjarisoa ity Bajaj ity ary tany Mangatokana vao hita tamin'ny valo ora maraina saingy Bajaj efa niboridana tanteraka, izay no azo ilazana azy. Tsy nisy niangana ireo kojakoja rehetra afaka nesorina maimaika tamin'ilay izy.
jeudi, 03 août 2017 22:46
Antsohihy: Miomana amin'ny Festival Lampogno
Manomana hetsika FESTIVAL LAMPOGNO ny zanaky Sofia izay hatao any Antsohihy ny 24 ka hatramin’ny 27 aogositra ho avy izao izay miteraka disadisa eo amin’ny solombavam-bahoaka Jao Jean sy ny mpikarakara ity hetsika ity, satria dia nanao hetsika mafanidrify amin’io andro io Andriamatoa solom-bavambahoaka.
Misy ambadika politika ao hoy I Jean Rigo mpanakanto ary anisan’ny mpikarakara ity hetsika ity.
Marihina moa fa dia andiany faha folo ity hetsika ity.
jeudi, 03 août 2017 22:44
Toamasina: Voasazy 5 taona an-tranomaizina ireo mpanera tra-tehaka tao amin’ny Tribonaly
Natao androany ny fitsarana ireo mpanera roa lahy tratra ambodiomby sady mitaky vola amin’ireo olona manan-draharaha eo anivon'ny Fitsarana ambaratonga voalohany Toamasina. Dimy taona am-ponja sazy mihatra avy no azon'izy roa lahy, niampy honotra 01 Ariary ho an'ny mpisolovava araka ny fangatahan'izy ireo, sy 16,4 tapitrisa Ariary izay vola nalain'izy ireo tamin'ireo mpanan-draharaha ihany, ary honotra 720.000 Ariary ho an'ny Fitsarana.
Nivoaka nandritra ny raharaham-pitsarana ny tsiambaratelon'izy roa lahy, satria misy mpitsara roa eo anivon'ny Fitsarana ambaratonga voalohany Toamasina mampiasa azy ireo, ka mpitsara eo anivon'ny Fampanoavana ny iray ary mpitsara mpamoaka didy ny faharoa.
jeudi, 03 août 2017 22:29
Akademia Miaramila Antsirabe: Vavitokan’ny andiany manokana faha-23 no “Major”
Notontosaina ny tolakandron’ny alakamisy 03 aogositra 2017 ny fanolorana ny mari-pahaizana sy ny mari-pankasitrahana ho an’ireo mpianatra ho manamboninahitra tao amin’ny Akademia Miaramila Antsirabe.
Andiany roa moa ireto havoaka ny zoma 04 aogositra ireto, dia ny andiany mivantana faha-38 “Fanjiry”, izay misy 67 mianadahy, ary ny andiany manokana faha-23, “Lafatra” izay miisa 11 mianadahy ka iray monja no vehivavy tamin’izy ireo.
Nanamarika ity andiany manokana ity moa ny nibatan’ilay vavitokana ny sangany na ny “Major” izany.
Ny zoma moa no hivoahan’izy ireto amin’ny fomba ofisialy sy hitokanana ny efitrano filanonana vaovao ao amin’ity sekolin’ny manamboninahitra ity.
jeudi, 03 août 2017 22:17
Finoana: Nanomboka androany ny JMJ Diosezy Antsirabe
Nosokafana tamin’ny fomba Ofisialy ny alakamisy 03 aogositra 2017 ny Andron’ny tanora Katolika ho an’ny Diosezin’Antsirabe na ny JMJ Diosezy izany.
Tanora manodidina ny 5.000 no tonga miatrika ny fihaonamben’ny tanora eto amin’ny renivohitry ny Diosezy, avy any amin’ireo Distrika ara-piangonana miisa 30, ka ny 50 amin’ireo dia vahiny nasaina manokana avy any amin’ny Diosezin’i Moramanga.
Tanojona moa raha ny fanazavana nomen’i Andriamalala Tahiry, filohan’ny Vovonan’ny Tanora Diosezy dia famelombelomana hatrany ny finoan’ny tanora manoloana ny vanim-potoana ankehitriny.
Mandritra ny 4 andro ny hetsika ka ankoatry ny katesizin’ny Fiangonana dia hisy ny fampahafantarana manokana manodidina ny finoana hafa ka isan’izany ny finoana Silamo. Ny Evekan’Antsirabe, Mgr Philippe Ranaivomanana no nitarika ny fotoana io andro io, notron’ny Eveka rahalahiny niisa 2.
jeudi, 03 août 2017 22:13
Sambava: Nandravarava ny afo
Nitrangana haintrano matsiravina tao amin’ny Fokontany Analamandrorofo ny alarobia 02 aogositra 2017 tamin’ny 8ora30 alina. Trano telo no rava tanteraka, tsy nisy entana tafavoaka fa lasa lavenonana tao anatin’ny indray mipi-maso, toy ny vary 100 gony, moto, lavanila masaka 25kg sns.
Trano miisa efatra no voatery noravana mba tsy hitaran’ny afo.
Mbola lesoka lehibe eto Sambava ny tsy fananany fiara mpamonjy voina na dia maro aza ny mpanao politika nampanantena hanome izany isaky ny vanim-potoana fampielezan-kevitra.
jeudi, 03 août 2017 21:59
Stade Annexe Mahamasina: FIER Mada 2017
Notontosaina etsy amin’ny Stade Annexe Mahamasina nanomboka omaly alarobia 02 aogositra ka tsy hifarana raha tsy amin’ny faran’ny herinandro ny FIER MADA izay efa andihany faha 19.
jeudi, 03 août 2017 12:05
Haromontana: Olona valo no namoy ny ainy taty Alaotra
Faritra mena amin'ny fihanaky ny aretina haromontana Alaotra Mangoro. Nanamafy izany ny Prefen’Ambatondrazaka Rakotondrasoa Daniel.
Olona miisa valo izao no efa namony ny ainy noho io valanaretina io, ka dimy tao amin'ny Kaominina Ambonivohitra Ambatondrazaka, ary ny telo tao amin'ny Kaominina Bejofo.
Hisy hetsika famonoana alika mirenireny faobe izay tontosaina ny 8 aogositra ho avy izao hiadiana amin’ny firongatr’ity haromontana ity. Nanentana ny prefen’Ambatondrazaka fa mila mandray ny andraikitra manandrify azy ny tsirairay.
jeudi, 03 août 2017 11:46
Herisetra: Ramatoa 59 taona naratra nodarohana Polisy
Ny tolakandron’ny alatsinainy 31 jolay teo, no nitrangan’ity herisetra nihatra tamin’i Beziliny ity. 59 taona ity farany, avy ao Andratamarina-Sambava.
Fizaram-pananana, tany sy trano, araka ny taratasy voasonia tamin’ny 19 marsa 2015 no niandohan’ny herisetra sy fampiasan-kery taminy. Nisara-bady tamin’ny 2015 izy raha vita soratra tamin’ny aprily 2002.
Rahalahim-badiny ilay Polisy nikasi-tanana azy io alatsinainy io, raha tonga tao Ambatofiatra Sambava, misy tany izay namidin-drangahy vadiny. Nilaza ilay Polisy fa novidiany 5 tapitrisa Ariary io tany io, ary ananany taratasy fifampivarotana ka tsy tokony hitsofotsofohana.